10 Facts Fun ku saabsan canabku laga yaabaa inaadan ogayn
Weligaa ma kala kulantay geedka canabka ah erayga? Malaha haa. Ma sheegi kartaa waxa ay tahay? Waxaad dhihi kara sida Google Translate sheegay "fuulitaanka ama ka danbeysa warshad Woody-qaado ninkii ka mid ah qoyska oo Cinab ah". Absolutely xaq lakiin weli waa geed canab kale oo walwalkaanagu waa in ay tani nooc kale oo geedka canabka ah. Ma is weydiisay waxa ay tahay? Haddii ay haa tahay ka dibna akhri maqaalkan.
Qaybta 1: Waa maxay geedka canabka ah?
Qeybta 2: Taariikhda
Qeybta 3: 10 Facts Fun ubbada
Canabka dhab ahaantii waa video qaybsiga app. Markii hore waxaa la bilaabay sidii app bilaash ah qalab macruufka ah. Laakiin hadda waxa ay sidoo kale waxaa laga heli karaa labada phone Android iyo Windows iyo sidoo kale leedahay shabakad u arkaysid videos. Marka laga reebo oo keliya wadaaga videos waxaa noo ogolaanaya in ay sameeyaan waxyaabo badan oo yar. Canabka awood u user si ay u qoraan lix labaad video clips dheer iyada oo ay camera in-app. Camera ayaa qori kaliya marka shaashada la taabtay. Sidaas user edit karaa on Daqsi ama abuurto saamayn mooshin stop. User markaas daabici karo in lix-labaad video dheer iyada oo goobta shabakada bulshada geedka canabka ah ee. Waxay kaloo iyaga la wadaagi karaan goobta shabakada bulshada ee sida Facebook ama Twitter. User sidoo kale isticmaali kartaa boostada user kale.
Bishii June 2012, Dom Hofmann, rus Yusupov, iyo Collin Krol aasaasay canabka ah, iyo in October 2012, Twitter iibsatay shirkadda $ 30 million. Canabka ahaa rasmi ah u furay on January 24, 2013 Marka hore waxa la bilaabay sidii app bilaash ah qalab macruufka iyo June 2, 2013 version android ayaa la sii daayay oo ku November 12, 2013 version daaqadaha ayaa la sii daayay. Version Internetka adeeg la bilaabay on May 1, 2014.
Ma is weydiisay sababta ay vine.co ma vine.com
Weligaa mala yaabtay sababta ay website-ka rasmiga ah geedka canabka ah waa vine.co ma vine.com? Waa sababtoo ah horay vine.com laga iibsaday by Amazon. Markii ay Dom Hofmann xiriiray la Amazon si aad u iibsato domain ka Amazon weydiiyay $500.000 oo sidaas halkii iibsigu vine.com ka Amazon iibsaday vine.co. cusub domain
Traffic ee Vine.com jiidhay saqafka
Marka canabka la bilaabay bishii January ee 2013, dadka qaar ka mid ah helay qasan oo waxay bilaabeen in ay soo booqdaan vine.com ee Amazon. Oo maadaama cunida Amazon ee vine.com helay tirada aadka u badan ee traffics iyo iibka ayaa sidoo kale kor u kacay on January 2013.
Doorovine laakiinvineapp Got
Arrintan oo uu weheliyo magac domain canabka ah ayaa sidoo kale seegay kulankii Twitter-u appvine geedka canabka ah, maxaa yeelay, durba qaaday. Sidaas, ay ku magacaabayvineapp. Waxay kaloo goobta la odhan jiray VineApp.com oo si fudud redirects user in website-ka rasmiga ah - vine.co
Logo ayaa, loop
Weligaa inta aad si dhow u dareentay ka logo canabka app? Maxaad V oo waan ku xiran yihiin sidan? V ayaa ku xiran oo aan u muujiyo geedka canabka ah oo dhab ah siddo. Waxa kale oo ay muujinaysaa sida geed canab ah oo qeexay agagaarka geed. Haddaba, haddii aad isku aragto aragtida hoos u yeellay of logo ah, oo aad ka heli doonto 6. ah, saasuuna, logo ayaa u taagan video lix labaad Nagatimo ah.
Sababta ka dambeysa Magaca
Canabka Magaca loo doortay ka Vignette eraygiisii ​​waxaa lagu qeexaa sida "a goobta impressionistic gaaban" ee. Vignette sidoo kale waa magaca filter sawir ay bixiyaan Twitter app saxiixa ah.
Ian Padgham - dhiman Hard Fan canabka ah
Ian Padgham, ayaa hore u soo uruuriyeen oo ku saabsan 300,000 oo kuwa raacsan, waxaa aad u badan Waali geedka canabka ah in uu shaqada ka tagay oo bilaabay in ay ka shaqeeyaan sidii lagu soo saare video-ga ah ee Twitter si ay u abuuraan canabka video xirfad leh.
Midowdo oo dhammu waxay Lix Second Video
Haddii user kasta canabka oo qura lix video labaad, waxaa jiri doona muuqaalka video ah oo ka badan 2.334 saacadood ah. Tani waxay noqon lahaa muddo ka badan Nagatimo filimka caanka ah "The Eebaha siddooyinka" gebogebada 250 jeer! Aamini karin!
Taas oo qayb ka ah Globe ee Jecel Waxa Most
Haddii aad diyaarin magaca dalalka oo canabka waa ugu caansan waxaad heli doontaa
United States, 38.2%
Canabka ah sida Television Advertisement Dhan
Weligaa ma fileyn in ay canabka loo isticmaali karo sida xayaysiinta ganacsiga on Television? Haa, waxa ay ahayd oo aan muddo hal laakiin marar badan iyo shirkaddii ugu horreysay ee looga faa'iideysan waxa uu ahaa Dunkin donuts. September 9, 2013 ay geedka canabka ah loo isticmaalo si ay u abuuraan ah xayaysiinta Television oo dhan.
Qaar ka mid ah Facts More Fun in Head ah Single
Imisa Cinabyo tweet halkii labaad? Shan
Waa goorma waqtiga ugu fiican inaad la wadaagto on canabka? Axada
Saac ee maalinta Cinabyo oo la daabacay inta badan? 10am - 11am
On aan maanta Cinabyo ah ugu la daabacay? On April 15, 2013 - Boston Marathon qaraxii maanta - 19,667.
Canab ah ku tilmaamay waa 4 jeer u badan tahay in la daawaday badan u dhiganta ay ku tilmaamay video.
Maqaalka waxa lagu tilmaamay canabka waa. Waxa kale oo ay isku dayeen in ay xisaabiso 10 xaqiiqooyinka ugu xiiso leh oo ku saabsan geedka canabka ah. Tan iyo markii uu bilaabay geedka canabka ah ayaa maraan caqabado dhowr ah iyo sidoo kale dhowr tartamaya. Inta badan iyaga ka mid ah halis ahaa oo weli waa muuqaalada fiidiyow cusub ee Instagram ee loo yaqaan Instagram video. Inkasta oo dhan, geedcanabkoodu horay ayaan u soconaa oo tegi doonaa waddo dheer.
Best iPhone Apps: 30 Great Apps si ay u daawadaan TV muujinaysaa iyo Movies on Your iPhone
Sida loo jar Video in dib markii Raadka
12 Tallaabooyinka Better Video Faalladaada
> Resource > Video > 10 Facts Fun ubbada